Video + DST=DSTapo ! – MyDago.com aime Madagascar
Video + DST=DSTapo !
Me Hanitra 16/03/2011
Nohalavaina ho 15 andro ny fitanana an’i Mamy Rokotoarivelo eny amin’ny BC (Brigade Criminelle) Anosy noho ilay raharaha fanendrikendrehana azy ho tompon’antoka tamin’ny baomba kapoaka teny amin’ny Masay. Araka ny nambaran’i Me Hanitra Razafimanantsoa dia be dia be ny tsy fanarahan-dalana hita.
Tsy voahaja ny zo tsy meloka raha tsy namoahan’ny Fitsarana didy manasazy na ilay antsoina hoe : « présomption d’innocence », raha mbola tsy vita akory ny fanadihadiana dia efa nanao valan-dresaka sahady ho an’ny mpanao gazety ny DST, sahabo tamin’ny 05 ora hariva mahery, hoy i Me Hanitra, kanefa tamin’ny fito hariva ka hatramin’ny telo ora maraina vao natao fanadihadiana i Mamy Rakotoarivelo. Toa efa fantatra mialoha ny vokatry ny fanadihadiana hoy izy. Tsy voahaja koa ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana na ny « secret d’instruction ».
Nomarihan-dRamatoa mpisolo vava ihany koa fa tsy ara-dalana ny fisahanan’ny DST sy ny CIRGN ny atontan-taratasin’ady iray. Marihina moa fa taorian’izay fanakianan’i Me Hanitra izany dia nilavo lefona momba ity raharaha ity ny Gal Richard « baomba » ka nametraka ny vokatry ny fanadihadiany rehetra eny anivon’ny fitsarana ary lasa i Kom Charly Nakany indray izany izao no hitokisan’Ambohitsirohitra mihoatra ilay Jeneraly manana fahaizana manokana momba ny baomba artizanaly.
Araka ny hita teny Anosy ihany koa dia nitsangana vavolombelona ny Renin’i Misa, ilay tovolahy nasaina nanonona ny anaran’i SG Tim ho nanakarama azy. « Novonoina sy noterena i Misa, nodorana tamin’ny herin’aratra ny vatany sy ny filahiany » mba hanaiky hanao sonia ilay PV hoy izy. Ny vadiny ihany koa dia nanamafy izany.
Tantara mitohy ity raharaha ity, ary ahiana ho vanja hampirehitra ny afo mihitsy, na eo amin’ny samy tompon’andraikitry ny filaminana (DST vs CIRGN) na ny mpahay lalàna sy ny be basy ary ny eo ny vahoaka sy ny FAT.
Jereo eto koa ny sary dimy Me Hanitra.
Auteur Solo RazafyPublié le 16 mars 2011 16 mars 2011 Catégories Malagasy, Politique, Vidéos
Précédent Article précédent : Un autre bilan sociopolitique négatif à l’horizon ?
Suivant Article suivant : Video – Fijoroana Vavolombelona